အမျိုးသားများ လျိုဝှက်စွာစိုးရိမ်ပူပန်နေတတ်ကြသော အချက် (၁၀) ချက် - ONE DAILY MEDIA
” အမျိုးသားတွေမှာ လျှို့ဝှက်ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ရှိနိုင်ပါ့မလား။ သူတို့ကြည့်ရတာ အရမ်းသန်မာပြီး ပြတ်သားပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ” – ဒါဟာ အမျိုးသမီး တော်တော်များများ ပြောတဲ့ စကားပါ။ သို့သော်လည်း ဤသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ချမှတ်ထားသော စံတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပုံသေနည်းများကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ အမျိုးသားတွေ အများစု စိတ်ပူ‌လေ့ရှိတဲ့ အချက် (၁၀) ချက်ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အမျိုးသမီးများအတွက် ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လှပမှု စံနမူနာဖြစ်သင့်သည်ဟု တစ်ချိန်လုံး တွေးတတ်လာစေရန် သင်ကြားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။ အဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး အစားအသောက်ကို ဆင်ခြင်သင့်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားများကတော့ ထိုကဲ့သို့သော မူများမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏သွင်ပြင်အတွက် စိတ်မပူ သို့မဟုတ် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ကြေငြာသောအမျိုးသားများကိုအားမကျ ဟုမဆိုလိုပါဘူး။ မဟုတ်ရင် ယောက်ျားတွေက ဘာကြောင့် Gym မှာ အချိန်အများကြီးကုန်မှာလဲ ? အဆိုးဆုံးမှာ ၎င်းတို့၏ ဘီယာဗိုက်ကို တစ်စုံတစ်ဦးမှ လှောင်ပြောင်ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံဆိုတာ အမျိုးသားတွေ စိတ်ပူရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ၎င်းတို့ကို အနာဂတ် လိုအပ်ချက်များအဖြစ် မှတ်ယူ ကြီးပြင်းလာရပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာ ချစ်သူရည်းစားမရှိရင်တောင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုအတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာက ငွေပဲလို့ထင်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအတွက် စိတ်ပူကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂရုစိုက်မှုကို အမျိုးသမီးတွေက ပိုလိုချင်ကြပါတယ်။
စံပြအမျိုးသား တစ်ယောက်၏ သွင်ပြင်များထဲအရပ်ရှည်ခြင်းပါဝင်နေတာကြောင့် အမျိုးသားများ၏ စိုးရိမ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကသာ အရပ်အမောင်းနိမ့်တာကို ဂရုမစိုက်ရင် အရပ်မရှည်တဲ့ ယောက်ျားလေးများအတွက် အခွင့်အလမ်းပိုများလာပါလိမ့်မယ်။ အသည်းနှလုံးရဲ့ အရွယ်အစားကသာ အရေးကြီးပါတယ်။
အမျိုးသားများ၏ မနာလိုမှုဟာ များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ သိသာထင်ရှားသည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို များစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်အား ရယ်မောဖွယ်ကောင်းသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အခြား အမျိုးသားတစ်ဦးအကြောင်း ပြောပြသောအခါတွင် သင့်လက်တွဲဖော်က စိုးရိမ်သောလက္ခဏာများ မပြနိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင်သိထားသင့်တာက သူက အများကြီး စိတ်ပူပြီး သူ့ကိုယ်သူ ပြိုင်ဘက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ် နေပါပြီ။ သူရဲ့အကြောက်တရားကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ သူ့ကို ရိုးသားစွာရှင်းပြပြီး နှိုင်းယှဉ် ခြိမ်းခြောက်မှု လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကို ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။
(၅) အချစ်ရေးအတွေ့အကြုံ အားနည်းခြင်း
Macho ပုံသဏ္ဍာန်သည် ယောက်ျားတိုင်း၏ အဆိုးဆုံးအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အတွေ့အကြုံရှိချစ်သူများကဲ့သို့ အသွင်အပြင်နှင့် ၎င်းတို့ရှိခဲ့ဖူးသော ရည်းစားဟောင်းအရေအတွက်ကို လိမ်ညာတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာ အမျိုးသမီးတွေလိုပဲ အမှားလုပ်မိမှာကို ကြောက်ကြပါတယ်။ သင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးတွင် ရိုးသားမှုဟာ သင့်အား ယုံကြည်မှုပိုရှိစေမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆံပင်နှင့် ဦးခေါင်းသည် အမျိုးသားများအတွက် အမြဲတမ်း ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ ဆံပင်အနည်းငယ်ကို ၎င်းသည် လုံလုံလောက်လောက် မက်မောဖွယ်ရှိရဲ့လား ၊ ဆံပင်တွေ အရမ်းရှည်နေလား ၊ အရမ်းရှုပ်ပွ‌ေနလား တွေးပူကြပါတယ်။ထိပ်ပြောင်ခြင်းသည် အဆိုးဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဤပြဿနာများကို လှောင်ပြောင်ခြင်းဖြင့် ပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါတယ်။
” ဝိတ်ချနေတယ်” ဆိုတဲ့စကားကို ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေဆီက မကြာခဏကြားနေပေမယ့် ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဝိတ်ချမယ်ပြောရင် ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေက သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သူတို့စားတဲ့အစားအစာတွေကို ဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ လူတိုင်းက ကျန်းမာချင်ကြပါတယ်။
အချစ်ရေးအကြောင်းကို အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းများတွင် ဆောင်းပါးမည်မျှ ရေးခဲ့သနည်း။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတွေက ဒါကို စပြီးဆွေးနွေးရင် အမျိုးသမီးတွေက ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ယောက်ျားတွေက “စိတ်မာတယ်” ဆိုတော့ အချစ်ရေးလိုမျိုး အသေးအမွှားကိစ္စတွေအတွက် စိတ်မပူသင့်ဘူး ထင်ကြပါသလား။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားတွေကလည်း အရာရာကို အဆင်ပြေချင်တာမို့ စိတ်ပူကြပါတယ်။
(၉) ချစ်သူကောင်မလေး၏ ရည်းစားဟောင်းအရေအတွက်
အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ လက်တွဲဖော် ဟောင်း တစ်ယောက်ထက်ပိုများနေပါက လက်ရှိ ချစ်သူဟာ ၎င်းတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဟု တွေးတတ်ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် သင့်လက်တွဲဖော်သည် သင့်ထက် အတွေ့အကြုံနည်းမည်ကို စိုးရိမ်နေတတ်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက အတိတ်က အတိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပြီး ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။
(၁၀) စိတ်ခံစားချက်များ ဖွင့်ဟခြင်း
မငိုပါနဲ့! မင်းက ယောက်ျားပဲ!” ဟူသည်မှာ ငယ်စဉ်ကပင် ယောက်ျားများ အမြဲကြားနေရသည့် စကားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့၏မိဘများက သူတို့ကို သန်မာစေပြီး မိသားစုကို အကာအကွယ်ပေးလိုသော ဆန္ဒရှိသော်လည်း၊ ခံစားချက်မီးထဲကို လောင်စာမထည့်ပါနဲ့။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မပြောပါနဲ့။